Ma heli karaa backlink sare ee PR link oo isku xira shirkadaha iibiya?
Maanta waxay u muuqan kartaa inay tahay cabsi badan oo ah SEOs iyo kuwa horumariya websadaha xirfadlayaasha ah marka ay timaaddo dood aad u badan oo ku saabsan dib-u-eegis tayo leh iyo naqshadaynta raadinta. Waa maxay sababta? Sababtoo ah marar badan oo hawsha ah ee lagu heli karo back-up PR oo ah iyadoon waxyeelleynin bogga internetka ama blogku waa arrin run ah oo adag. Inta badan, bartilmaameedka ugu weyn ee SEO waa in la kordhiyo heerka CTR, kor u qaadista taraafikada, iyo sidoo kale kor u qaadista beddelka bogga. Iyo haddii aad rabto inaad dib-u-celin sare ka hesho shirkadaha iibiya shirkadaha - waxaa jira tiro badan oo ka mid ah ciyaartoydan oo riixaya adeegyadooda "Websaytka" ee ku yaala Webka - halkan waxaa ku yaal xaqiiqooyin qabow oo ku saabsan dhismaha xiriiriye. Waxyaabahani waa Google in marmarka qaarkood lagu ogaado wax kasta oo shaki ku jiro oo ka dhacaya website-kaaga ama blog (i. e. , kalluun aad u sarreeya oo tayo leh oo tayo hoose leh, isticmaalaya qalab qarsoodi ah, nuxurka spammy, iyo habab kasta oo kale ama nidaamyo xun ee badass ah Black-Hat iyo Gray-Hat SEO). Iyadoo la tixgelinayo dhacdada ugu xumayd markaad ka hesho adeegyo badan oo PR oo ah adeeg bixiyayaasha aan waxba galabsan (i. e. , liistada tayadoodu hooseeyso, liiska qorista ee isdaba-joogga ah, beeraha isku xira iyo isku-xirka gawaarida - a. k. a. is-weydaarsiga) - wax walbaba wuu ku dhici karaa burbur. Waxaan loola jeedaa in website-kaaga laga mamnuuco raadinta internetka mar iyo weligiisba. Sidaa darteed, tixgelinta halista khatarta ah ee hoos ku xusan waxay ka timaadaa wax kasta oo aad ka ogtahay oo ku saabsan dib-u-celinta mushaharka, noocyada ugu muhiimsan ee rikoodhada rikoodhada iyo sida looga fogaado iyaga ugu fiican, ugu yaraan kuwa ugu badan ee dhacaya.
Noocyada Aasaasiga ah ee Ciqaabta u Dhexeeya
Ka hor intaan wax kale, aan aragno - ciqaabta rikoodhka qaarkood ayaa curyaan ku yeelan kara oo kaliya qayb ka mid ah taraafikadaada webka, iyo inta kale iyaga ayaa sida caadiga ah lagu soo rogaa saldhigga oo dhan. Iyadoo la tixgelinayo xadgudubyada ugu badan ee iibsashada ama iibinta backlinks, waxaa jira saddex nooc oo kala duwan oo rigoore ah - cayaarta qayb ahaan, ciqaabta goobta, iyo dhameystirida.
Khariidadda Qaybta - waxay u taagan tahay rigoor gacanta ah oo ku dhex wata website-ka ama blog-hoosaadyada natiijooyinka raadinta. Waxay badanaa dhacdaa marka Google uu ogaado waxqabad cajiib ah oo ah dabeecadda dhabta ah, oo inta badan la xidhiidha wax ka qabashada ereyada muhiimka ah iyo keyfrasoyin badan - oo kaliya in la dhigo gaadiidka badan, iyo iyada oo aan la bixin wax qiimo dhab ah oo leh bogga.
Ciqaabta Racfaanka - Waxay noqon kartaa saameyn aad u daran oo leh cidhiidhin culus. Iyada oo awood u leh in ay yareeyaan nus ka mid ah taraafikada webka, nooca rikoodhka noocyadan waxaa badanaa lagu dabaqaa marka ay timaaddo isticmaalka Gray-Hat backlinks, tusaale ahaan qulqulo qarsoodi ah, si khaas ah oo aan ku habboonayn ama xitaa aan si buuxda u qotonin sharciyada qashinka sida farmashiyaha, sino ama khamaar. Haddii aad la macaamilayso iibiye hooseeya oo tayo hoose leh oo ku rajo weyn inuu horey usocdo boggaaga internetka - ku dhawaad ​​waqti aan la joogin - waa wakhti aad ku cabsiiso. Sida laga yaabo inaad u socoto calaamad casaan leh Google iyo dalbasho rigoore.
Dhammaystirin buuxda - wuxuu u hadlaa naftiisa. Waxaan loola jeedaa in ganacsiga gawaarida gardarrada ah uu si sahal ah wax uga sii wadi karo. Waxaan loola jeedaa koorasyada ugu nasiib-darrada ah ee dhacdooyinka marka boggaaga ama blog-kaaga lagu tuhunsan yahay xad-gudub culus oo leh xirfadaha dhismaha ee aan xariifka ahayn ama nidaamyada ganacsiga - oo si fudud looga soocayo index index. Inta badan, sida natiijada aan la faraxsaneyn waxay ku xirantahay xiriirka hooseeya ee iibiya "shirkadaha", iyo "macmiil" Source .